बिग् टक् | कृष्ण प्रधान
हास्यव्यङ्ग्य कृष्ण प्रधान August 30, 2021, 10:03 pm
मानिसको स्वाभाव अचम्म. उदेकलाग्दो र विचित्रको हुन्छ । कोही साह्रै कुरौटे हुन्छन् भने कोही अर्काकै मात्रै खोइरो खन्ने हुन्छन् । कोही चाहिँ ठूल्ठूलो कुरा गर्ने, हाँक लाउने पनि हुन्छन् । यस्तो ठूल्ठूलो कुरा, हाँक लाउने कुरालाई दार्जिलिङे कथ्य भाषामा बीटी वा बिग् टक भनिन्छ । कोही फेरि ढाँटढुँटे पनि हुन्छन् । ढाँटेरै मान्छेलाई लट्याउने स्वाभावको पनि देखिँदोछ । ढाँट कुरा गर्नेलाई दार्जिलिङे कथ्य भाषामा 'बिग् टक्' गरेको वा 'बीटी' दिेएको भनिन थालेको छ । यो 'बिग् टक्' वा 'बीटी' हिजोआज निक्कै प्रचलित भइसकेको छ ।
बिग् टक् गर्ने वी बीटी दिनेहरूमध्ये एकजना हुन् विषकोब्रा चापागाईँ । यिनले अवसर ग्रहण गरेका दस वर्ष हुँदैछ । मान्छे सौम्य शान्त देखिए पनि बिग् टक् गरेरै मान्छेलाई छक्कै र पक्कै पार्नु, वाल्लै पार्नु, हेरेको हेऱ्यै पार्नु मात्र होइन उनीहरूबाट सराहना, श्यावाशी, टिठ्याइँ पनि देखिन्छ । गाउँ-घर, शहर-बजार यिनलाई विषकोब्रा चापागाईँ नाउँले कसैले चिन्दैनन् । किनभने अचेल गाउँ-घर शहर बजारतिरका सबैले यिनलाई बूढ़ा-बूढ़ादेखि भुराभुरी समेत बीटी (बिग् टक्) बाजे भन्छन् भने कतिले बीबीबी (बिग् टक् बाजे) भन्छन् । कतिले बी क्यूब३ (b3) भन्छन् । बिग् टक् गरेरै एकक्षणमै बिग् टक् सुन्नेहरूको भीड़ पार्छन् । साउँभन्दा सूदको माया भनेजस्तो नाति भनेपछि भुत्तुकै छन् विषक्रोबा चापागाईँ । नाती बिना कतै हिँड़्दैनन् ।
बेलुकी इभिनिङ वकमा जाने यिनको दैनिक अभ्यास छ । नातिलाई लिएर इभनिङ वक गर्दै जाँदा छेवैको विशाल मैदानमा पुग्छन् । जहाँ मान्छे धेर देख्छन् त्यहीँ उनको बिग् टक् शुरु भइहाल्छ । उनको बिग् टक् ढाँट हो भनेर जान्दा जान्दै पनि यिनको बिग् टक् सुन्न नचाहने थोरै देखिन्छन् । अचानक गाउँमा चितुवा पसेको कुरा निस्कियो । बस बाँदरलाई लिस्नु लाएको जत्तिकै भयो विषक्रोबा चापागाईँलाई । उनी अविराम बोल्दै गए, "अरे तिमेरु चितुवाको कुरा गर्छौ ? मैले ता फेस टु फेस बाघ भेटेको छु अऩ्त ।"
उनको कुरा साह्रै चाखलाग्दो हुन्छ । छक्कपर्दै एकजनाको जिज्ञासा, "आम्बो...फेस टु फेस बाघ ? अनि सरलाई एटेक गरेन ?"
बिग् टक् बाजेको बिग् टक् - "मलाई बाघले एटेक गर्छ ? त्यत्रो साहस कहाँ मेरो छेउमा । काँ.....दस माइलको फारस छेउको दोकानमा मोमो खाँदै थिएँ । चौध फुटजस्तो लामो बाघ लमक-लमक गर्दै मतिर आयो । त्यहाँ भएका सबै चिच्याउन थाले । मैले सबैलाई चूपो लागि बस्ने हुकूम गरेँ । सबै श्वास न वास भएर बसे । डड़ाँक बाघ मेरो छेउमै आएर मैले मोमो खाको हेरिरह्यो । बाघको चोखे लाग्छ भनेर एउटा मोमो त्यसको मुखैमा फ्याँकिदे । मुटु थर्काउऩे पाराले गर्ज्यो त्यो । मैले रिसले केही देखिनँ । मेरो पाला छेउमा भएको मोमोको तातो सूप बाघको मुखैमा छ्यापिदिए । बाघ पुच्छर लुकाएर टाप ।"
सबै छक्कै परेँ....एकजना अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिक्षकले कुरालाई अझ टेसिलो बनाउँदै थपे, "हो...हो...फारसबाट शिकार खेली आँउँदै गर्दा डड़ाँक बाघ निराश भएर आको देखेँ....गाड़ी न्यूट्रल राखेरै रोकेँ । बाघ आएर...ठिङ्गै मेरो गाड़ी अघि उभियो...मुख डल्लै भिजेको थियो..."
बिग् टक् बिचैमा बोले, "यस... यू आर हण्ड्रेड पर्सेण्ट राइट...त्यसको मुख भिजेको थियो भने पक्कै पनि मैले बाघको मुखमा मोमोको सुप छ्यापेकै बाघ हो ।"
त्यसपछि के भयो...के भयो भनी प्रहरी अधिक्षकलाई सबैले सोधे । प्रहरी अधिक्षक गम्भीर भावमा बोले, "बाघ ठ्याक्कै हल्ले ता के । मेरो पाला बन्दुक ताकेँ । बाघले पनि पोजिशन लियो, मैले पनि पोजिशन लिएँ । शुट गरेर शालालाई ठहरै पारिदिउँ भनेर बन्दुक ताकेको ता....बन्दुकमा बुलेट नै छैन रहेछ । मेरो पालो बिस्तारो ब्याक पाकिटबाट बन्दुकको लाइसेन्स बाघलाई देखाइदिएँ...बन्दुकको लाइसेन्स देखेर बाघ हार्ट एटेक भएर भूइँमा लोट्यो ।"
फेरि बिग् टक बाजेको बिग् टक्, "मैले मोमोको सुप मुखमा छ्याप्दै त्यो बाघको सातो गएको थियो । नत्र सरलाई ठाड़ै गाँज्ने नि !"
बिग् टक् बाजेलाई कसले सक्ने ? तर उनको एउटा ठूलो कमजोरी थियो ठिक ब्रिटिश कवि लर्ड बायरन (जर्ज गर्डन बायरन) जस्तो । तर बायरन झोंकी थिएँ भने यी विषक्रोबा चापागाईँ नम्र मिजासका । बायरन जन्मजात खोरण्डो थिए । उनी खोच्याउँदै हिँड़्थे । विछट्टै सुन्दर भएकाले बाटामा हिँड़्ने जोसुकैले उनलाई मख्ख परेर हेर्थे । तरुणीहरू ता उनको सुन्दरता देखेर भुतुक्कै हुन्थे । बाटामा हिँड्नेले उनको रुप हेर्नेलाई सोझै निहुँ खोज्थे, "म खोचिँदै हिँड़ेको किन हेरिस्? हाम्रा बिग् टकको पनि निधारको माझमै ठूलो टुटुल्को थियो । खोरण्डो भएकोमा बायरनलाई आत्मग्लानि थियो भने टुटुल्को भएकोमा विषक्रोबालाई पनि । आत्मग्लानिमा मलमपट्टी गर्न उनको निधारमा टुटुल्को उठेको कारण बताएर मात्र श्वास बिसाउँथे ।
यसकारण, कतै मान्छेको भीड़ देखे वा कतै जनसभा हुँदै गरेको देखे कि त्यहाँ गएर टुटुल्कोबारे कैफियत दिनलाई उनको मुख स्याउँस्याउँ हुन्थ्यो । जस्तै भीड़मा पनि नातिको हात समातेर तान्दै भीड़को अघिल्लो पङ्क्तिमा उभिन्थे वा बस्थे । उनलाई नचिन्ने कोही थिएन । उनलाई बोल्ने मौका दिइहाल्थे ।
शहिद दिवसको आयोजन हुँदैथ्यो । नाति चेपेर बिग् टक् त्यहाँ पुगे । शहिद दिवसको वेदी अघि उभिएर एकेक जनाले भाषण दिँदै थिए । आयोजकमण्डलीबाट विषक्रोब्रा सरलाई पनि बोल्ने मौका दिइयो । के खोज्छस् कानो आँखो भनेझै विषक्रोबा सरले पनि भाषण दिन थाले, "आफ्नो स्वतन्त्रताको निम्ति हामीले पनि प्रशासन विरुद्ध निकै लड़ाइँ गर्नुपरेको थियो । हामीले आन्दोलन गर्दा तपाईहरू कति ता जन्मिनु पनि भएको थिए । विशाल जुलूस लिएर हामी आन्दोलनमा सड़कमा ओर्लका छौं । प्रहरी, सेना तयार छ । पुलिसले जुलूसलाई ट्राफिक चौकदेखि ठ्याम्मै अघि बढ़्न दिएको छैन । पुलिससित ठेलमठेल चल्दैछ । विशाल जुलूसले पुलिसलाई मिच्दै गएपछि पुलिसले हार खाएर लाठी चार्ज गऱ्यो । भागाभाग । हामी पनि के कम्ति र ! ढुङ्गा-मूढ़ा. सोड़ाको बोतल फ्याँक्यौं पुलिसको भीड़मा । उनीहरू कति घाइते भए...कतिको टाउको फुटे । यता पुलिसको लाठी प्रहारले हाम्राहरूको पनि टाउको फुट्यो । एकजनाले मेरो टाउकैमा प्रहार गऱ्यो । रगतपच्छे भएर म दङ्गै भूइँमा लोटेँ । होश आएर हेर्दा म ता अस्पतालको बेडमा पो रहेछु । (विशाल जनसभा स्तब्ध) । त्यसको परिणाम के भो थाहा छ तपाईहरूलाई ? हेर्नोस् मेरो निधारको माझमा (निधारको टुटुल्को देखाउँदै) यो टुटल्को...देख्नुभो ? यो पुलिसको लाठी प्रहारको परिणाम हो ।"
विषक्रोबा अधिकारीले जनसभामा समवेत् जनसाधारणको दृष्टि आकर्षण गरे । विशाल जनसभाको गगनभ्दी करतलध्वनिले उनको टुटुल्को स्याप्पै सुकेको अनुभव गरी गजक्कै हुँदै कसैसित नबोली विषक्रोबा चापागाईँ नातिको हात तान्दै जनसभाबाट बाहिरए ।
फुटबल खेल्दै गरेको ठाउँमा उही नाति लिएर पुगे विषक्रोबा चापागाईँ । मैदानभित्रै पसी...खेल्दै गरेको फुटबल च्याप्पै समाती उफार्दै फुटबल खेल्नेहरूलाई भाषण दिन थाले - "तिमीहरू फुटबल खेल्नै जान्दैनौ । उहिले हामीले फुटबल खेल्दा विरोधी टिमलाई आछु-आछु पार्थ्यौं । म ब्याक खेल्थेँ । विरोधी टिमको कसैलाई डिफेन्स एरियामा ढिम्किनै दिँदिनँ थिएँ । जस्तै जण्डाले गोली लिएर आए पनि त्यसको खुट्टाबाट फुडटबल खोसेर फुटबल डाँड़ा कट्टाइदिन्थे । त्यतिबेला म चीनको पर्खालजस्तै भएर डिफेन्स बक्समा उभिन्थे । मैले फुटबल रोकेको देखेर साइड लाइनमा बस्ने केटीहरू चिच्याउँथे, "ब्याक कस्तो ? हम्बरजस्तो ।" उताबाट अर्को आवाज आउँथ्यो, "ब्याक कस्तो ? बुल्डोजरजस्तो ।" फेरि अर्को कुनाबाट, "ब्याक कस्तो ? भित्ताजस्तो ।"
मैले ठ्याम्मै गोल हुन दिँदिनँ थिएँ । एकदिन आर्मी र हाम्रो क्लबमाझ घमासान फुटबलयुद्ध भयो । आर्मीका फुटबलरहरू प्रेसर कुकुरमा हाल्दा बीस सिटीमा पनि नपाक्ने खालका थिए । उनीहरूको फिला हेरेर हाम्रो फिला हेर्दा आफैलाई हरेश लाग्ने । आर्मी टिमले हामीलाई पेलेको पेल्यै छ । प्रथमार्द्धसम्म म्याच बराबरीमै सिद्धियो । द्वितायार्द्धमा हामीले एक गोल दियौं । एक गोल खाएपछि आर्मीकाहरू घाइते बाघझैं आक्रमण गर्न थाले । काँड़जस्तो गोली लिएर आउने...मैले डङ्ङै दिएर उनीहरूको गोल हाल्ने सपना भताभुङ्ग पारिदिन्थेँ । पछि पछि ता आर्मीहरूका गुल्चे खेल्न थाले । एकजना छिप्पेको प्लेयरले रिसैले उनको बुटले मेरो टाउकोमै हिर्कायो । म दङ्गै भूइँमा लोटेँ । निधारबाट तरतरती रगत चुहुन थाल्यो । रेफरीले म्याच एकक्षण स्थगित गरेर...मेडिकल टिमलाई मैदानभित्र आउने ईशारा गरेको मात्रै थाहा छ....त्यसपछि के भयो थाहा भएन ।"
बिग् टकको कुरा सुन्न ग्वारग्वार्ती मान्छेहरू बिग टकलाई घेर्न थाले । सबै उत्सुकतापूर्वक बिग् टकको कुरा सुन्दैछन ध्यानमग्न भएर । कतिले टिठ्याउँदैछन् पनि । बिग् टकले आफ्नो निधारको टुटुल्को मुसार्दै गम्भीर, टिठलाग्दो स्वरमा भने, "देख्नुभो ? त्यसको परिणाम । त्यो कौड़ेको बुटले लागेर मेरो यो टुटुल्को (टुटुल्को देखाउँदै) भएको हो ।"
बिग् टकको मर्मस्पर्शी, च्यूँच्यूलाग्दो कुरा सुनेर कति दु:खित भए; कति पीड़ित । कतिले उनको प्रशंसा गरे । यस्तो प्रशंसा सुनेर गजक्क र मसक्क हुँदै बिग् टक् नातिको हात समाती चूपचाप भीड़बाट प्रस्थान भए ।
निकै दिनपछि गाउँमै नारी उत्थान् संस्थाले आयोजन गरेको कार्यक्रममा नातिसित विषक्रोबा चापागाईँ टुपलुक्कै । बिग टकलाई देख्ने बित्तिक्कै उनलाई मञ्चमा भाषणको निम्ति बोलाइयो । पहिले ता नाइँनास्ति गरेकोजस्तो मात्र के गरेथ्यो एकजनाले जबरजस्ती हात समातेर मञ्चमा ल्याए । उनको भाषण शुरु भयो, "नारी उत्थान संस्थाले आयोजन गरेको यस आयोजनालाई हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु । म मेरो वक्तव्य एउटा रोमाञ्चक कथाबाट यहाँहरूमक्ष राख्न चाहन्छु (करतल ध्वनि ) । ठण्डाको याम । छिट्टै रात पर्छ होइन ? अफिसको काम धेर भएर अबेर गरी अफिसबाट घर जाँदैथिएँ । यस्तै साँढ़े सात /पौने आठ बजेको हुनुपर्छ । अचानक एउटी युवतीको चित्कार सुनेँ । चार-पाँचजना केटाहरूले ती युवतीलाई खेद्दै रहेछन् । मैले वाधा हाले । केटी उम्किइन । ती युवाहरूसित मेरो घमासान लड़ाइँ भयो । उनीहरू चारजना म एकजना । सकेसम्म लड़ाइँ गरेँ नि ! दुइजनालाई ता ढालेँ । एकजनाले ता बाँसले मेरो निधारमै हान्यो । त्यसपछि उनीहरू भागे । बाँसले निधारमा लागेर मेरो यो टुटुल्को (टुटुल्को देखाउँदै) भएको हो ।" यति बोलेर विषक्रोबा चापागाइँ मौन हुन्छन् । गोजीबाट रुमाल निकाली आँशु पुछ्दै मञ्चबाट ओर्ली नातिको हात च्यापेर बाहिरिन्छन् ।
सधैं सुगाजस्तो बोल्ने नाति आज ता ठ्याम्मै बोलेको छैन । चूप छ । विषक्रोबा अधिकारीले टुटुल्कोको स्पष्टिकरण दिएर सबैलाई सन्तुष्ट पारेकाले आत्मतृप्तिको खुशीले गजक्क र मसक्क भइरहेका थिए । उनको टुटुल्को स्याप्पै भएको कल्पनाको बाईपङ्खी घोड़ामा उड़िरहेका थिए । केही समयसम्म चूपोलागि हिँड़ेपछि नाति बोल्यो, "ठूला बाबा.....तपाई ढाँट बोल्नुहुन्छ हई ! यू आर लायर ग्राण्ड पा...यू आर लायर । हाम्री म्यामले ता हामीलाई ढाँट बोल्नु पाप हो भन्छिन् । तपाई ता कत्ति ढाँट बोल्नुहुन्छ । तपाईलाई पाप लाग्दैन ठूल्बा ? मैले तपाईलाई आज पक्रे...तपाई कति ढँटुवा ।"
विष्णुक्रोबा चापागाईँ उर्फ बिग् टकका मुहार-आँखामा अपराधीको हण्टरले सोड़्क्याउन थाल्यो । आफैलाई निकै असहाय ठान्न थाले । साँच्चै तिनले ढाँट बोलेरै संसार पिटेकै हो । दस रुपियाँको नोट निकालेर नातिको हातमा दिँदै भने, "कसैलाई पनि नभन्नू ल !" पैसा पाएपछि नाति भक्कुचूर खुशी । दुवैजना मौन हिँड़िरहेका छन् । बिग् टक् सुर्तामा परे ।
घरमा आउने बित्तिक्कै जेठो छोरोलाई भने, "ठूले ! मलाई सार्जन दोर्जेकहाँ लैजा । यिनी विख्यात् प्लाष्टिक सार्जन हुन् । मेरो टुटुल्कोको अपरेशन गरिदे बाबु । छोरो बिलवन्द परे ।
बुहारीले मनमनै भनिन्, "बूढ़ोलाई यो उमेरमा आएर भीमरत्ति भयो कि क्या हो ?"
नातिले बाज्येलाई निर्निमेष दृष्टिले हेरिह्यो । बाजे र नातिमाझ दृष्टि विनय भये ।
खास गाँठी कुरा नाति र बाजेमाझ मात्रै सीमित रह्यो ।
जेसुकै होस्. निधारमाझको टुटुल्को स्याप्पै भए पनि वा जर्मनबाट प्लाष्टिक सर्जरी नै गरेर आए पनि बिषक्रोबा चापागाईंको नाम बीटी (बिग् टक्), बीबीबी (बिग् टक् बाजे) वा बी क्यूब३ (b3) नामहरू परिवर्तन हुने होइन नै ।